Ogaden News Agency (ONA) – Arimihii ugu dambeeyay ay Wargaysyada caalamka ka qoreen Itobiya
Arimihii ugu dambeeyay ay Wargaysyada caalamka ka qoreen Itobiya
Posted by ONA Admin	/ July 25, 2012
Waxaa caalamka daneeya arimaha Geeska Afrika isha ku hayaan qofka qaban doona jagada uu baneeyo Meles iyadoo ilaa hadda aan la saadaalin karin wararka ka imanaya xukuumadda Itobiya ee ku saabsan caafimaadka KT Meles Zinawi oo ah mid aad u yar, taxadar badanna uu ka muuqdo iyo wax badan oo la qarinayo.
Warar farabadan ayaa is-dhex yaacaya Addisababa waxayna dadka Itobiyaanka ah aaminsan yihiin hadda inuusan noolayn Meles Zinawi oo 4 maalin ka hor uu dhintay. Arintaa waxaa suuqa soo galiyay oo dadka u xaqiijiyay nin duuliye ka ah Ethiopian Airlines oo sheegay inuu ka helay warkaa saaxiibkii oo Tigree ah oo xogogaal u ah caafimaadka Meles Zinawi.
Ilaa hadda lama garan karo sababta uu Meles uga dhigtay ku-xigeen nin aan awood badan ku dhex lahayn ururka EPRDF, oon ahayn qawmiyadaha xooga badan ee Itobiya. Mr. Hailemariam Desalegn oo ka soo jeeda is-bahaysiga shucuubta koonfureed oo aan waligood ka qabanin xukun dalka Itobiya oo waliba ay adoonsan jireen ayay dadka siyaasadda indh-indheeya ku tilmaameen inuu ahaa nin loogu talagalay inuu ku simo kursiga shaqsi uu watay KT Meles Zinawi hasa ahaatee uu la suugayay waqti ku haboon inuu shaaca ka qaado. Waxay isku raacsan yahiin dadka la socda siyaasadda Itobiya ee xiligan inuusan qaban karin jagada Raisal Wasaarinimada ninka hadda ku xigeenka u ah Meles Zinawi, Mr. Hailemariam Desalegn oo dastuur ahaan ay tahay inuu qabto jagadaa. Sidaa darteed waxaa ka dhex socda looltan qarsoon xoogaga isku haya jagadaa, waxaana la sheegayaa inay arintaasi sabab u tahay qarinta dhimashada Meles, oo la doonayo in maydkiisa lagu hayo qaboojiyaha inta ay xoogagga Tigreega ah isku raaca hayaan qofkii badali lahaa.
Idaacadda VOA qaybta amxaariga oo saadalin weydiisay dadka waxay inta badan carabka ku dhufteen in afada Meles Mrs Azeb iyo Wasiirka caafimaadka Dr. Tewodros Adhanom Gebreyesus. Arimahaasoo idil marka laga yimaado, waxaa jira nin awood badan kasbaday oo hadda loo badinayo inuu xukunka qabsan doono. Waa safiirkii Itobiya u fadhin jiray dalka Belgium Mr. Berhane Gebre-Christos oo ahaan jiray waligiiba safiirka TPLF-ta dibadaha u jooga. Ninkan ayaa awoodo badan ka dhex urursaday TPLF-ta dhexdeeda, inkastoo garabka ka soo horjeeda oo aad u xoogbadan iyagana aanay si sahal ah ugu hogaansami doonin.
Waxyaabaha ugu badan ee tuhunka abuuray, ee dadka Itobiyaanka ah ay ku xaqiijinayaan inuusan noolayn Meles ayaa waxaa ka mid ah cadaadiska la saaray warbaahinta Itobiya inay ka hadlaan arinta caafimaadka Meles.
Ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta caalamka ee loo yaqaano Committee to Protect Journalists (CPJ) ayaa ka dalbatay xukuumadda Itobiya inay warbixin ka soo siiso sababta wargays todiobaadla ahaa oo ka soo bixi jiray magaalada Addisababa loo joojiyay Axadii ka dib markuu lagu soo daabacay maqaal ka xog waramaya arimihii laga qoray caafimaadka Meles Zinawi. Todobaadlaha –Feteh- oo horey u sheegay inuusan wax ka horimanaya xukuumadda Itobiya qori doonin ayaa u arkayay wax caadi ah oo xukuumadda aanay sas ka qabin warar ku saabsan in RW Meles uu ku jiro isbitaal ku yaala dalkaBelgiumoo aan la garanaynin xanuunka haya.
Ururka CPJ ayaa ku tilmaamay arintaa inay muujinayso cadaadiska xukuumadda Itobiya ay ku hayso saxaafadda iyo sida ay xukuumadda Itobiya uga go’antahay in wararka ku saabsan caafimaadka Meles aan sinaba loo ogaanin. “Muwaadin walba wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado caafimaadka hogaamiyahiisa iyo dhaqanka xukuumadiisa” ayuu yidhi ninka masuulka uga ah Geeska Afrika ururka Saxafiyiinta caalamka CPJ.
Markaad soo ururiso, waxaa muuqata inuu looltan culus ka dhex socdo Itobiya oo waliba dawlada waaweyn ay ku kala dhex jiraan si xukunka loogu wareejiyo shaqsi awood badan ku dhex leh qawmiyadda Tigree oo ciidanka iyo nabadsugudda dalka gacanta ku haysa.
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay bakhtiga amaba sakaraadka kt malez .waana fursad qaali ah taasoo mudan inay kubaraarugto ummada soomaaliyeed gaar ahaan ummada ogadenia kunool siday uga xoroobi lahaayeen cadawga ku gaamuray dalka ogadenia . tani waa ifafaale muujinaya gooni u istaagga ogadenia waa hadday ka faa idaystaan reer ogadenia (aduunyadu waa hooska labadiisa galin ) shalay malez maantana ogadenia